Mwari “Akagadzirira Kukanganwira” Zvivi Zvedu | Swedera Pedyo
1-3. (a) Mutoroi unorema uyo munyori wePisarema Dhavhidhi akatakura, uye akawana sei nyaradzo nokuda kwomwoyo wake waitambura? (b) Patinotadza, mutoroi watingaguma tatakura, asi Jehovha anotipikirei?
“ZVAKAIPA zvangu zvafukidza musoro wangu,” akanyora kudaro munyori wePisarema Dhavhidhi. “Ndakati rukutu, ndavhunika kwazvo; ndakagomera nokuda kwokutambudzika kwomwoyo wangu.” (Pisarema 38:4, 8) Dhavhidhi aiziva kuti mutoro wehana ine mhaka unogona kuva unorema sei. Asi akawana nyaradzo nokuda kwomwoyo wake waitambudzika. Akanzwisisa kuti kunyange zvazvo Jehovha achivenga chivi, haavengi mutadzi kana iye apfidza zvechokwadi obva asiya nzira yake yokutadza. Nokutenda kwakazara kuti Jehovha anoda kuratidza ngoni kuvanopfidza, Dhavhidhi akati: “Imi, Ishe . . . [“makagadzirira,” NW] kukanganwira.”—Pisarema 86:5.
2 Patinotadza, nesuwo tingatakura mutoro unorema wehana inorwadza. Manzwiro okuzvidemba aya akanaka. Anogona kutiita kuti tiite zviito zvakanaka kuti tiruramise zvikanganiso zvedu. Zvisinei, pane ngozi yokukundwa nokuva nemhaka. Mwoyo wedu unotipa mhaka ungaramba uchiti Jehovha haazotiregereri, pasinei nokuti tapfidza zvakadini. Kana tika“medzwa” nechivi, Satani angaedza kutikandisa mapfumo pasi, tonzwa sokuti Jehovha anotiona setisingakoshi, vasina kukodzera kumushumira.—2 VaKorinde 2:5-11.
3 Iwayo ndiwo maonero anoita Jehovha zvinhu here? Nyangwe! Kukanganwira rutivi rworudo rukuru rwaJehovha. MuShoko rake, anotipikira kuti patinoratidza kupfidza kwechokwadi, kunobva pamwoyo, anoda kutikanganwira. (Zvirevo 28:13) Kuti tisanzwe sokuti hazvibviri kuti tikanganwirwe naJehovha, ngationgororei kuti nei achikanganwira uye sei.
Chikonzero Nei Jehovha “Akagadzirira Kukanganwira”
4. Jehovha anoyeukei pamusoro pezvatiri, uye izvi zvinomuita kuti atibate sei?
4 Jehovha anoziva zvatisingagoni. “Unoziva chatakaitwa nacho, unorangarira kuti tiri guruva,” rinodaro Pisarema 103:14. Haakanganwi kuti tiri zvisikwa zveguruva, zvisina kusimba, somugumisiro wokusakwana. Mashoko okuti anoziva “chatakaitwa nacho” anotiyeuchidza kuti Bhaibheri rinofananidza Jehovha nomuumbi uye isu nemidziyo yevhu yaanoumba. * (Jeremia 18:2-6) Muumbi Mukuru anodzikamisa kubata kwake nesu maererano nokushaya simba kwedu nemhaka yechivi uye nzira iyo tinoteerera kana kusateerera kutungamirira kwake.
5. Bhuku raVaRoma rinorondedzera sei kubata nesimba kwechivi?
5 Jehovha anonzwisisa kuti chivi chine simba zvakadini. Shoko rake rinorondedzera chivi sesimba guru rakabatisisa munhu. Chivi chakambobata zvakasimba sei? Mubhuku raVaRoma, muapostora Pauro anotsanangura achiti: Tiri “pasi pechivi,” sevarwi vari pasi pomutungamiriri wavo (VaRoma 3:9); chivi chaka“tonga” vanhu samambo (VaRoma 5:21); “chinogara,” matiri (VaRoma 7:17, 20); “mutemo” wacho unoramba uchishanda matiri, nokudaro chichiedza kudzora upenyu hwedu. (VaRoma 7:23, 25) Chivi chakabata zvakasimba panyama yedu isina kukwana!—VaRoma 7:21, 24.
6, 7. (a) Jehovha anoona sei avo vanotsvaka ngoni dzake nomwoyo unopfidza? (b) Nei tisingafaniri kungofunga kuti Mwari achatinzwira ngoni?
6 Nokudaro, Jehovha anoziva kuti hatigoni kumuteerera zvakakwana, pasinei nokuti tingashuva nomwoyo wose sei kuti tidaro kwaari. Norudo anotipikira kuti patinotsvaka ngoni dzake nomwoyo unopfidza achakanganwira. Pisarema 51:17 rinoti: “Zvibayiro zvaMwari mweya wakaputsika; mwoyo wakaputsika nowakapwanyika, imi Mwari hamungaushori.” Jehovha haazomborambi kana kuti kudzinga, mwoyo “wakaputsika nowakapwanyika” nokuremerwa nechivi.
7 Zvisinei, izvi zvinoreva here kuti tinogona kungofunga kuti Mwari achatinzwira ngoni, tichizvipembedza nokutadza kwedu kwatakaberekwa nakwo toita chivi? Chokwadi kwete! Jehovha haatungamirirwi nokungonzwa ngoni. Ngoni dzake dzine padzinogumira. Haazombokanganwiri avo nokuomesa mwoyo vane tsika yokutadza nemaune vasingamboratidzi kana kupfidza. (VaHebheru 10:26) Kune rumwe rutivi, kana akaona mwoyo unopfidza, akagadzirira kukanganwira. Ngatimboona zvino mamwe emashoko akajeka anoshandiswa muBhaibheri kurondedzera rutivi runoshamisa urwu rworudo rwaJehovha.
Jehovha Anokanganwira Zvakakwana Sei?
8. Naizvozvo chii icho Jehovha anoita paanotikanganwira zvivi zvedu, uye izvi zvinotipa chivimbo chei?
8 Dhavhidhi aipfidza akati: “Ndakakuzivisai chivi changu, handina kuvanza chakaipa changu. . . . Imi mukandikanganwira kuipa kwechivi changu.” (Pisarema 32:5; tisu tatsveyamisa mabhii.) Shoko rokuti “kanganwira” rinobva mushoko rechiHebheru iro rinoreva “kusimudza” kana kuti “kutakura.” Kushandiswa kwaro pano kunoratidza kubvisa “chivi, kuva nemhaka, kudarika.” Naizvozvo, Jehovha akaita seakasimudza zvivi zvaDhavhidhi ndokuzviendesa kure. Sezviri pachena izvi zvakanyevenutsa kunzwa ane mhosva uko Dhavhidhi akanga akatakura. (Pisarema 32:3) Nesuwo tinogona kuva nechivimbo chakazara muna Mwari anotakura zvivi zveavo vanotsvaka kukanganwirwa nokutenda muchibayiro chorudzikinuro chaJesu.—Mateu 20:28.
9. Jehovha anoisa zvivi zvedu kure nesu zvakadini?
9 Dhavhidhi akashandisa mumwe muenzaniso wakajeka kurondedzera kukanganwira kwaJehovha: “Sokuva kure kwamabvazuva namavirira, saizvozvo wakabvisa kudarika kwedu kwose kure nesu.” (Tisu tatsveyamisa mabhii; Pisarema 103:12) Mabvazuva nemavirira zviri kure nakure zvakadini? Chaizvo, kumabvazuva ndiko kuresa kwatingafungidzira kubva kumavirira; nzvimbo mbiri idzi hadzimbofi dzakasangana. Imwe nyanzvi inoti mashoko aya anoreva kuti “kure sezvinobvira; kure sezvatingafungidzira.” Mashoko akafuridzirwa aDhavhidhi anotiudza kuti Jehovha paanokanganwira, anoisa zvivi zvedu kure nesu sezvatingafungidzira.
“Zvivi zvenyu . . . zvichachena sechando”
10. Jehovha paanokanganwira zvivi zvedu, nei tisingafaniri kunzwa kuti tine vara rezvivi zvakadaro kwoupenyu hwedu hwose?
10 Wakamboedza kubvisa vara retsvina pahembe chena here? Pamwe pasinei nokuedza nepose pawaigona napo, vara racho rakaramba richingooneka. Cherechedza kuti Jehovha anorondedzera sei kukwanisa kwake kukanganwira: “Kunyange zvivi zvenyu zvakaita somucheka mutsvuku, zvichachena sechando; kunyange zviri zvishava somuti mushava, zvichaita samakushe amakwai.” (Isaya 1:18; tisu tatsveyamisa mabhii.) Mashoko okuti “mucheka mutsvuku” anoratidza ruvara rwakati piriviri kutsvuka. * “Mushava” zvinoreva kuti wakanga uri mucheka waiva nemavara akajeka zvikuru. (Nahumi 2:3) Nokuedza kwedu toga hatimbofi takabvisa vara rechivi. Asi Jehovha anogona kubvisa zvivi zvitsvuku nezvishava ozviita zvichena sechando kana kuti seshinda isina kupendwa. Jehovha paanokanganwira zvivi zvedu, hatifaniri kunzwa sokuti tine vara rezvivi zvakadaro kwoupenyu hwedu hwose.
11. Jehovha anokandira zvivi zvedu shure kwake mupfungwai?
11 Murwiyo runosvika pamwoyo rwokuonga rwakanyorwa naHezekia arapwa hosha yaida kumuuraya, akati kuna Jehovha: “Makarashira zvivi zvangu zvose shure kwenyu.” (Isaya 38:17; tisu tatsveyamisa mabhii.) Jehovha anoratidzwa pano seanotora zvivi zvomutadzi anopfidza ozvikandira shure Kwake kwaasingazvioni kana kufunga nezvazvo zvakare. Maererano nerimwe bhuku, pfungwa yacho ingataurwa ichinzi: “Makaita [zvivi zvangu] sokunge zvakanga zvisina kumboitika.” Izvozvo hazvikurudziri here?
12. Muprofita Mika anoratidza sei kuti Jehovha paanokanganwira, anobvisa zvivi zvedu zvachose?
12 Muchipikirwa chokudzorera, muprofita Mika akaratidza kuva nechokwadi kwake kuti Jehovha aizokanganwira vanhu vaipfidza: “Ndianiko Mwari wakafanana nemi, . . . unopfuura kudarika kwavakasara venhaka yake? . . . Muchakandira zvivi zvavo zvose mukudzika kwegungwa.” (Mika 7:18, 19; tisu tatsveyamisa mabhii.) Fungidzira kuti mashoko iwayo airevei kune avo vakararama munguva yakanyorwa Bhaibheri. Pakanga pane mukana here wokuwanazve chimwe chinhu chainge chakandirwa “mukudzika kwegungwa”? Naizvozvo mashoko aMika anoratidza kuti Jehovha paanokanganwira, anobvisa zvivi zvedu zvachose.
13. Mashoko aJesu okuti ‘Tikanganwirei zvikwereti zvedu’ anorevei?
13 Jesu akapa muenzaniso woukama hwomukweretesi nomukwereti achifananidza nokukanganwira kwaJehovha. Jesu akatikurudzira kunyengetera kuti: ‘Tikanganwirei zvikwereti zvedu.’ (Mateu 6:12) Nokudaro Jesu akafananidza zvivi nezvikwereti. (Ruka 11:4) Patinotadza, tinova “vakwereti” kuna Jehovha. Pamusoro pezvinoreva shoko rechiito rechiGiriki rinoshandurwa kuti “tikanganwirei,” rimwe bhuku rinoti: “Kusunungura, kurega, chikwereti, nokurega kuchireva.” Neimwe pfungwa, Jehovha paanokanganwira, anodzima chikwereti chaaigona kuzobvunza kwatiri. Vatadzi vanopfidza nokudaro vanogona kunyaradzwa. Jehovha haazomborayiri kuripwa kwechikwereti chaakadzima!—Pisarema 32:1, 2.
14. Mashoko okuti “kuti zvivi zvenyu zvidzimwe” anounza mufananidzo worudzii mupfungwa?
14 Kukanganwira kwaJehovha kunorondedzerwa zvakare pana Mabasa 3:19 panoti: “Naizvozvo, pfidzai, mutendeuke kuti zvivi zvenyu zvidzimwe.” Mashoko iwayo okupedzisira anoshandura shoko rechiito rechiGiriki rinogona kureva “kupukuta, . . . kukanzura kana kuti kuparadza.” Maererano nedzimwe nyanzvi, mufananidzo unopiwa ndewokudzima zvakanyorwa nemaoko. Izvi zvaibvira sei? Ingi yaiwanzoshandiswa kare kare yaigadzirwa nomusanganiswa wematsito, namo, nemvura. Achangopedza kushanda neingi yakadaro, munhu aigona kutora jira nyoro opukuta achidzima zvaanyora. Apa pane mufananidzo wakanaka kwazvo wengoni dzaJehovha. Paanokanganwira zvivi zvedu, anoita sokuti anotora jira ozvidzima.
Jehovha anoda kuti tizive kuti “akagadzirira kukanganwira”
15. Chii icho Jehovha anoda kuti tizive nezvake?
15 Patinofungisisa pamusoro pemashoko akasiyana aya anojekesa, hazvina kujeka here kuti Jehovha anoda kuti tizive kuti akagadzirira zvechokwadi kukanganwira zvivi zvedu chero bedzi achitiwana tichipfidza zvechokwadi? Hatifaniri kutya kuti achazotitonga pamusoro pezvivi izvozvo munguva yemberi. Izvi zvinoratidzwa nechimwe chinhu icho Bhaibheri rinozivisa pamusoro pengoni huru dzaJehovha: Paanokanganwira, anokanganwa.
“Zvivi Zvavo Handingazozvirangariri”
16, 17. Bhaibheri rinorevei parinoti Jehovha anokanganwa zvivi zvedu, uye nei uchipindura kudaro?
16 Jehovha akapikira nezvevaya vari musungano itsva achiti: “Nokuti ndichakanganwira kuipa kwavo, nezvivi zvavo handingazozvirangariri.” (Jeremia 31:34) Izvi zvinoreva here kuti Jehovha paanokanganwira haazogoni kuyeuka zvekare? Izvozvo hazvingambovi izvo. Bhaibheri rinotiudza nezvezvivi zvevanhu vakawanda avo Jehovha akakanganwira, kusanganisira Dhavhidhi. (2 Samueri 11:1-17; 12:13) Jehovha sezviri pachena achiri kuziva zvavakakanganisa. Chinyorwa chezvivi zvavo, nechokupfidza kwavo uye kukanganwirwa naMwari chakachengeterwa kutibatsira. (VaRoma 15:4) Saka Bhaibheri rinorevei zvino parinotaura kuti Jehovha haa“yeuki” zvivi zvevaanokanganwira?
17 Shoko rechiito rechiHebheru rakashandurwa kuti ‘ndichayeuka’ haringorevi kuyeuka zvakapfuura. Theological Wordbook of the Old Testament rinotaura kuti zvinosanganisira “pfungwa yokuwedzera yokuzoita chiito chakakodzera.” Naizvozvo mupfungwa iyi, ku“yeuka” chivi kunosanganisira kuita chiito mukurwisana nevatadzi. (Hosea 9:9) Asi apo Mwari anoti “zvivi zvavo handingazvirangariri,” ari kutipikira kuti kana angokanganwira vatadzi vanopfidza chete, haazoiti chimwe chinhu kwavari munguva yemberi nemhaka yezvivi izvozvo. (Ezekieri 18:21, 22) Nokudaro Jehovha anokanganwa mupfungwa yokuti haarambi achimutsa zvivi zvedu kuti atipomere kana kuti arambe achitiranga. Hazvinyaradzi here kuziva kuti Mwari wedu anokanganwira okanganwa?
Zvakadini Nemigumisiro Yacho?
18. Nei kukanganwira kusingarevi kuti mutadzi anopfidza anosunungurwa pamigumisiro yose yokutadza kwake?
18 Ko kugara akagadzirira kukanganwira kwaJehovha kunoreva here kuti mutadzi anopfidza anosunungurwa pamigumisiro yose yokutadza kwake? Nyangwe. Hatigoni kutadza zvikasatitambudza. Pauro akanyora kuti: “Zvinodyara munhu, ndizvo zvaachakohwa.” (VaGaratiya 6:7) Tingatarisana nemimwe migumisiro yezviito zvedu. Izvi hazvirevi kuti pashure pokutikanganwira Jehovha anoparira kuti tiwirwe nenhamo. Panomuka zvinetso, muKristu haafaniri kunzwa sokuti, ‘Pamwe Jehovha ari kundiranga nokuda kwezvivi zvakapfuura.’ (Jakobho 1:13) Ukuwo, Jehovha haatidziviriri pamigumisiro yose yezviito zvedu zvisina kururama. Kurambana, pamuviri pasingadikanwi, hosha inopomeranwa pabonde, kurasikirwa nokuvimbwa kana kuti kuremekedzwa—zvose izvi zvingava migumisiro inosiririsa yechivi isingadzivisiki. Yeuka kuti kunyange pashure pokukanganwira Dhavhidhi zvivi zvake kuna Bhatishebha naUria, Jehovha haana kudzivirira Dhavhidhi pamigumisiro ine ngwavaira yakatevera.—2 Samueri 12:9-12.
19-21. (a) Mutemo wakanyorwa pana Revhitiko 6:1-7 waibatsira sei ainge atadzirwa uye mutadzi wacho? (b) Kana vamwe vakakuvadzwa nezvivi zvedu, Jehovha anofara patinoita chii?
19 Zvivi zvedu zvingava nemigumisiro yokuwedzera, kunyanya kana vamwe vakakuvadzwa nezviito zvedu. Funga somuenzaniso nhau iri muchitsauko 6 chaRevhitiko. Mutemo waMosesi pano unotaura nezvenhau apo munhu anoita chivi chakakomba chokutora nhumbi dzomumwe muIsraeri nougororo, kuba, kana kuti kukorovhera. Mutadzi ipapo anoramba kuti ane mhaka, kunyange kusatombokendenga kusvika pakupika nhema. Panova nokukakavadzana uyu achitaura izvi uyu achitaura zvimwe. Zvisinei, pave paya mutadzi anozotambudzwa nehana opupura chivi chake. Kuti akanganwirwe naMwari anofanira kuita zvimwe zvinhu zvitatu: kudzorera zvaakanga atora, kuripa waakabira nechikamu chimwe muzvishanu chezvinhu zvaakaba, opa gondohwe sechibayiro chechivi. Mutemo unozotiwo: “Mupristi amuyananisire pamberi paJehovha, akanganwirwe.”—Revhitiko 6:1-7.
20 Mutemo uyu wakanga uri urongwa hwengoni hwakaitwa naMwari. Zvaibatsira ainge akanganisirwa, uyo aidzorerwa zvinhu zvake uye pasina mubvunzo ainzwa kunyevenutswa kukuru apo mutadzi pakupedzisira aibvuma chivi chake. Panguva imwe chete, mutemo waibatsira uyo pakupedzisira hana yake yaimuita kuti abvume mhaka yake oruramisa chikanganiso chake. Chokwadi, kana airamba kudaro, aisazokanganwirwa naMwari.
21 Kunyange zvazvo tisiri pasi poMutemo waMosesi, Mutemo iwoyo unotibatsira kunzwisisa mafungiro aJehovha, kusanganisira zvaanofunga pamusoro pokukanganwira. (VaKorose 2:13, 14) Kana vamwe vakakuvadzwa nezvivi zvedu, Mwari anofara patinoita zvatinogona kururamisa chisina kururama. (Mateu 5:23, 24) Izvi zvingasanganisira kubvuma chivi chedu, kubvuma mhosva yedu, uye kunyange kukumbira ruregerero kune watinenge tatadzira. Ipapo tinogona kuteterera kuna Jehovha tichishandisa chibayiro chaJesu towana chipikirwa chokuti takanganwirwa naMwari.—VaHebheru 10:21, 22.
22. Chii chingauya pamwe chete nokukanganwira kwaJehovha?
22 Kungofanana nomubereki wose ane rudo, Jehovha anogona kukanganwira pamwe chete nokuranga kwakati kuti. (Zvirevo 3:11, 12) MuKristu anopfidza angafanira kusiya ropafadzo yake yokushumira somukuru, mushumiri anoshumira, kana kuti muevhangeri wenguva yakazara. Zvingamurwadza kwechinguva kurasikirwa neropafadzo dzaikosha kwaari. Zvisinei, chirango chakadaro hachirevi kuti Jehovha haana kukanganwira. Tinofanira kuyeuka kuti chirango chinobva kuna Jehovha uchapupu hwokutida kwake. Kuchigamuchira nokuchishandisa kwakanakira isu.—VaHebheru 12:5-11.
23. Nei tisingafaniri kumboguma tafunga kuti hatichakodzeri ngoni dzaJehovha, uye nei tichifanira kutevedzera kukanganwira kwake?
23 Zvinozorodza zvikuru kuziva kuti Mwari wedu “akagadzirira kukanganwira”! Pasinei nezvikanganiso zvatingave takaita, hatifaniri kumboguma tafunga kuti hatichakodzeri ngoni dzaJehovha. Kana tikapfidza zvechokwadi, totora matanho okururamisa zvisina kururama, tonyengeterera nomwoyo wose kukanganwirwa nemhaka yeropa raJesu rakadeurwa, tinogona kuva nechivimbo chakazara chokuti Jehovha achatikanganwira. (1 Johani 1:9) Ngatitevedzerei kukanganwira kwake mune zvatinoitirana. Pamusoro pazvo, kana Jehovha asingatadzi achigona kutikanganwira norudo kudaro, isu vanhu vanotadza hatifaniri kuita zvose zvatinogona kukanganwirana here?
^ ndima 4 Shoko rechiHebheru rinoshandurwa kuti “chatakaitwa nacho” rinoshandiswawo pamusoro pemidziyo yevhu inoumbwa nomuumbi.—Isaya 29:16.
^ ndima 10 Imwe nyanzvi inoti ruvara rutsvuku “rwakanga ruri ruvara rusingabvi. Dova, kana mvura kana kugeza, kana kushandiswa nguva refu zvakanga zvisingagoni kurubvisa.”
2 Makoronike 33:1-13 Nei Jehovha akakanganwira Manase, uye izvi zvinotidzidzisei pamusoro pengoni Dzake?
Mateu 6:12, 14, 15 Nei tichifanira kukanganwira vamwe kana pane chikonzero chakanaka chokuita kudaro?
Ruka 15:11-32 Mufananidzo uyu unotidzidzisei pamusoro pokuda kukanganwira kwaJehovha, uye izvozvo zvinokuita kuti unzwe sei?
2 VaKorinde 7:8-11 Chii chatinofanira kuita kuitira kuti tikanganwirwe naMwari?
Mabatiro akaita Jehovha vatadzi kare anogona kutidzidzisa zvakawanda nezvechido chake chokukanganwira.
Zvaungaita Kuti Ukanganwire
Sei zvisiri nyore kukanganwira? Ona kuti Bhaibheri ringabatsira sei.